मसाईसको भन्सार र परम्परा - सबैभन्दा प्रसिद्ध गाउँहरू मध्ये एक Absolut यात्रा
मसाईसको भन्सार र परम्परा
मासाइहरू तन्जानिया र केन्यामा बस्ने मानिसहरू हुन्। तिनीहरू विश्वकै चिनिएका जनजातिहरू मध्ये एक हुन्, आंशिक रूपमा उनीहरूको लुगा वा नृत्यका कारण, तर यो बिर्सनु हुँदैन कि यी सबै समावेश छ मसाईहरूको चलन र परम्परा जसको हामी आज कुरा गर्नेछौं।
जीवनको धेरै उत्सुक तरीका संसारको अर्को भाग को लागी, सधैं आफ्नै लागि भने। उनीहरूसँग हामीलाई धेरै कुरा भन्नु छ र यो जस्तै शहरमा पस्नु सधैं एक रोमाञ्चक हुन्छ। के तपाई यसको सबैभन्दा खास रहस्य जान्न चाहानुहुन्छ?
1 वयस्क बन्न, तिनीहरूले सिंहको शिकार गर्नुपर्‍यो
2 सबैभन्दा शक्तिशाली, सब भन्दा गाईवस्तुको साथ एक
3 तिनीहरूको राजनीतिक प्रणाली एल्डरहरूको बैठक मा आधारित छ
4 जनताको भविष्यवक्ता र उनको कार्यहरू
5 घाँस पवित्र छ
6 तपाईले मृतकको बारेमा कहिले पनि कुरा गर्नुहुन्न
7 महिला, पुरुष र तिनीहरूको गहना
9 गाई रगत सबै भन्दा राम्रो औषधि हो
वयस्क बन्न, तिनीहरूले सिंहको शिकार गर्नुपर्‍यो
मसाईसको चलन र परम्पराहरू मध्ये हामी यो फेला पार्दछौं। सबै शहर शहर युगहरु बाट बनेको छ भन्ने तथ्यबाट आउँछ। तसर्थ, त्यहाँ धेरै समूहहरू छन् जुन यो जनजाति बनाउँछ र बाल्यकाल वा माइनर योद्धा देखि प्रमुख योद्धा वा नाबालिग र जेष्ठ वयस्क सम्म। तर एक पूर्ण वयस्क हुनको लागि मुख्य कदम थियो सिंह खोज्नुहोस्। यो एक सबैभन्दा साधारण संस्कार थियो जहाँ एक योद्धा बन्ने मानिसको लायक प्रदर्शन भएको थियो। तर किनभने सिंह एक सुरक्षित प्रजाति हो, यस परम्परा अब पछ्याउँदैन। आज, जे गरिन्छ त्यसको विपरीत हो र तिनीहरू सिंहको संरक्षक हुन्छन्।
सबैभन्दा शक्तिशाली, सब भन्दा गाईवस्तुको साथ एक
यदि तपाईं यस जनजातिको बिचमा कुनै महत्त्वपूर्ण वा शक्तिशाली बन्न चाहानुहुन्छ भने, त्यसो भए तपाईले गाईवस्तुहरूको अधिक टाउको लिनु पर्छ। किनभने यहाँ यो स्थिति वा पैसा, तार्किक हिसाबले गणना गरिएको छैन। उनीहरूको लागि सब भन्दा बहुमूल्य सम्पत्ति पशुपालन हो र जोसँग तिनीहरूको डोमेनमा सब भन्दा बढि महत्वपूर्ण हुन्छ। यो दुबै धन र शक्तिसँग पर्यायवाची छ अरूको अगाडि।
तिनीहरूको राजनीतिक प्रणाली एल्डरहरूको बैठक मा आधारित छ
स्थानको बुद्धिमती बुजुर्गहरू हुन् जस्तो कि उनीहरूसँग आवाज छ। तसर्थ, तिनीहरूको प्रणाली विकेन्द्रीकृत भएको छ, के गरिब को सबै अन्य सदस्यहरु संग भेट र केही बिषयहरु मा कुरा छ। यी छलफल वा बैठक प्रकृतिमा सार्वजनिक छन्।
जनताको भविष्यवक्ता र उनको कार्यहरू
मसाईसको चलन र परम्परा भित्रै हामी यो फेला पार्दछौं। शहरमा एक व्यक्ति छ जसलाई बोलाइएको छ भविष्यवक्ता वा 'लाइबोन'। यसको उद्देश्य के हो? ठीक छ, गोत्र आफै र भगवान नगाई बीचमा मध्यस्थको रूपमा काम गर्दै। तपाइँ संयोगले यस जस्तो रोजगार प्राप्त गर्नुहुन्न, तर यो वंशानुगत छ, त्यसैले यो पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा पारित गरियो र केहि मानिसहरूमा सीमित छ। यो एक किसिमको न्यायाधीश जस्तो हो जससँग एकै साथ भविष्यको दर्शन पनि छ। यी सबै बाहेक, उहाँ त्यो पनि हुनुहुन्छ जसले समारोहहरू संचालन गर्नुका साथै युद्धको लागि अग्रसरता दिनुहुन्छ वा पानीलाई वर्षा गराउन पानीको आह्वान गर्ने जिम्मामा हुनुहुन्छ।
घाँस पवित्र छ
मासाइसका लागि यो एक पवित्र तत्व हो, किनभने यो पशुपालनले भरिन्छ। त्यसकारण उनीहरूको परम्परामा यो भनिएको थियो कि जब कुनै व्यक्तिले एक बच्चालाई हिर्काउन वा गालीगलौट गर्ने बेलामा त्यसले केही घाँस उखेल्न सक्छ र त्यो सजाय दिन सक्दैन। अर्थात्, सजाय अमान्य.
तपाईले मृतकको बारेमा कहिले पनि कुरा गर्नुहुन्न
यद्यपि हामीहरूको विश्वास छ कि एक व्यक्तिको मात्र मृत्यु हुन्छ जब उनीहरूले उनीहरूको बारेमा कुरा गर्न छोड्छन् वा जब तिनीहरूले बिर्सन्छन्, यी व्यक्तिहरू आफ्ना चलनहरूको बीचमा यस बारे कुरा गर्दैनन्। त्यसोभए जब कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ, तिनीहरू अब उप्रान्त प्रत्यक्ष कुरा गर्दैनन्, किनकि यदि उनीहरूलाई सint्केत गर्नुपर्दछ भने, त्यसोभए तिनीहरूले उपनामको माध्यमबाट उनीहरूको नाम राख्दछन्। थप रूपमा, ती विचार गर्छन् केवल एक चुनिएका केही अनन्त जीवनको योग्य छन्, ती लासहरूलाई खुला हावामा स्केभेन्जरहरू खानको लागि छोड्नेछन्। कुलका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू गाडिनेछन्, तर सँधै गहिरो गहिराईमा। तिनीहरूको छेउमा तिनीहरूले केही घाँस, स्यान्डल र एउटा उखु राख्नेछन्।
महिला, पुरुष र तिनीहरूको गहना
पक्कै तपाईंले देख्नु भएको छ, तिनीहरूका रातो वस्त्र बाहेक, महिलाले पनि विभिन्न हार वा ब्रेसलेट लगाउँदछन् र अन्य धेरै रंगीन सामानहरू। तिनीहरू मोतीहरू द्वारा बनाइन्छन् जुन विभिन्न शेडहरू छन्। उनीहरूको लागि, त्यहाँ पनि झुम्का र सामानहरू हुनेछन्। अझ धेरै, प्वालहरू (ठूलो मात्रामा) बढ्दो हुन्छन् किन कि तिनीहरू पर्याप्त शोषक तत्वहरू झुण्ड्याउँदछन्, जस मध्ये हामी केही पशु टस्कलाई हाइलाइट गर्दछौं।
यो सत्य हो कि बहुविवाहको धारणा प्रायः सबै जनजातिहरुमा छ। उनीहरूसँग जति पत्नीहरू छन् उनीहरूको शक्ति त्यति नै ठूलो हुन्छ। यस कारणका लागि, र यस विचारको आधारमा, विवाहको व्यवस्था गरीन्छ किनकि महिला धेरै जवान छ। तर यो पनि उल्लेख गर्नुपर्दछ कि यसले यो पहिले रोक्दैन मागी बिवाह, अर्को उमेरका व्यक्तिहरूसँग उनीहरूको उमेरसँग केहि सम्बन्ध हुन सक्छ।
गाई रगत सबै भन्दा राम्रो औषधि हो
हामीलाई थाहा छ पशुहरू यस गोत्रको आजीविका हुन्। पहिले हामीले भन्यौं कि घाँस पवित्र थियो, किनकि यसले गाईहरूका लागि खाना प्रदान गर्‍यो, जुन पनि पवित्र छन्। तर कहिलेकाँही यदि उनीहरू कुनै जनावरबाट छुटकारा पाउँछन् भने यो खानुपर्दछ र यति धेरै, कि तिनीहरूले बिल्कुलै सबैको फाइदा लिन्छन्। सीsहरूबाट hooves मा यसले सजावटको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। तर यदि त्यहाँ केही कुञ्जी छ भने यो रगत हो, किनकि तिनीहरू यसलाई एक साँचो पुनर्स्थापनाको रूपमा लिन्छन्। यसैले यो बिरामी व्यक्ति वा केटाहरूलाई मात्र दिइन्छ जब उनीहरूको खतना गरियो। जनावरहरूको दुध र रगतको साथ उनीहरूलाई एक प्रकारको दही बनाउन पनि यो सामान्य छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » मसाईसको भन्सार र परम्परा
मौन समुद्र तट